မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြforနာများအတွက်လူနေအိမ်ရာကုသမှုတွင်အမျိုးသားများအကြားစိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ - အတွေ့အကြုံမှရှောင်ရှားခြင်း၏အခန်းကဏ္ 2017 (၂၀၁၇) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌ Porn On
Clin Psychol Psychother ။ 2017 Nov;24(6):1246-1253. doi: 10.1002/cpp.2085.
Brem MJ1, Shorey RC2, အန်ဒါဆင်က S3, စတူးဝပ် GL1.
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်ကုသမှုခံယူသူများ၏သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ (CSBs) တွင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ မကုသရသေးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုသည်ကုသမှုခံယူလိုသောအမျိုးသားများအတွက်ပြန်လည်သက်သာသွားခြင်းကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ယခင်သုတေသနနှင့်သီအိုရီအရ CSB များသည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်း (ဥပမာစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း) မှလွတ်မြောက်ရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲရန်အားထုတ်ခြင်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟုဖော်ပြသည်။ သို့သော်ဤအယူအဆကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြforနာများအတွက်ကုသမှုခံယူနေသည့်အမျိုးသားနမူနာများတွင်စစ်ဆေးခြင်းမရှိသေးပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြordersနာများရှိသောအမျိုးသားလူ ဦး ရေအတွင်းရှိ CSB များကိုပိုမိုနားလည်ရန်အားထုတ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ယခုလေ့လာမှုသည်အမျိုးသားများစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းလက္ခဏာများနှင့် CSBs များအသုံးပြုခြင်းတို့၏ဆက်စပ်မှုကိုအခြေခံသည့်အလားအလာရှိသောယန္တရားတစ်ခုအဖြစ်အတွေ့အကြုံဆိုင်ရာရှောင်ရှားခြင်းအားပထမဆုံးလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုလေ့လာမှုသည်လူနေအိမ်ရာကုသမှုခံယူသောအမျိုးသား ၁၅၀ ၏ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်မှတ်တမ်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးပြproblemsနာများနှင့်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်စဉ်အတွေ့အကြုံမှရှောင်ရှားခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသားစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုလက္ခဏာများမှ CSBs သို့တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းများအားစစ်ဆေးရန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းပုံစံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရလဒ်များအတွေ့အကြုံရှောင်ရှားခြင်းမှတဆင့် CSB အပေါ်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်စိတ်လက္ခဏာတွေနှစ် ဦး စလုံး၏သိသိသာသာသွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်ကုသမှုခံယူသောလူ ဦး ရေတွင် CSB နှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနကိုတိုးချဲ့ပြီးတိုးချဲ့သည် တွေ့ရှိချက်များအရ CSB အတွက် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသားများနာကျင်စေသောပြည်တွင်းဖြစ်ရပ်များကိုရှောင်ရှားရန်ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
KEY ကို Practitioner: MESSAGE
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်လူနေအိမ်ကုသမှုယောက်ျားအကြားစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ရောဂါလက္ခဏာများမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရှောင်ရှားခြင်းအပြုသဘောပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူယောက်ျားအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များအတွက်ကုသမှုယောက်ျားအဘို့, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရောဂါလက္ခဏာများအကြားစပ်လျဉ်းအတွေ့အကြုံရှောင်ရှားခြင်းအားဖြင့်, စိတျအပိုငျးအတွက်ရှင်းလင်းထားပါသည်။ အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းကိုမနှစ်သက်နှငျ့ရငျဆိုငျရသောအခါပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူကူညီပေးခြင်းယောက်ျားဆန္ဒရှိအတွေ့အကြုံများ processing ပိုပြီးသပ္ပါယ်နည်းလမ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်, သူတို့ကိုလွတ်ပေးဖို့ဆန့်ကျင်အဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုလျော့ကျစေနိုင်တယ်။
KEYWORDS: စိုးရိမ်စိတ်; အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; စိတ်ကျရောဂါ; အတွေ့အကြုံရှောင်ရှားခြင်း, လိင်စွဲ; ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း